Ogaden News Agency (ONA) – 30 qoys oo ree guura ah oo xabsiga Gunagado lagu xidhay
30 qoys oo ree guura ah oo xabsiga Gunagado lagu xidhay
18/07/2015 Nulxan oo ka tirsan degmada Gunagado ee Gobolka Jarar waxay ciidanka Woyanaha ka geysteen xadhig lagufuliyay 30 qoys oo xoolo dhaqato ah. Shacabkaas oo laga dhacay hantidoodii iyo xolahoodii iyaga oo ka kaxeystay 5,000 neef oo Adhi iyo Ido isugu jira iyo 300 geela.
Dadkan xabsiga loo taxaabay ayaa dhan in kabadan 150 qof kuwaas oo loo qaaday jeelasha magaalada Gunagado, kadibna loo sii dhaadhiciyay xabsiyada kale ee Ethiopia dadka ku ciqaabto.
Ibraahim Cabdi Siciid oo 90 Jira iyo reerkiisa oo kakoobna 20 qof ayaa kamida dadka jeelasha Gunagado loo dhaadhiciyay. Sidoo kale walaalkiis Axmed Nuur Cabdi Siciid oo isna 70 Jira iyo qosykiisa ayaa kamida dadka la xidhay.
Cabdullaahi Cali Nuur iyo Mahad Sugule iyo qoysaskooda ayaa Iyana kamida 30-ka qoys ee laga soo qabtay deeganka Nulxan ee Degmada Gunagado.
Shacbakan xoola dhaqatada ah illaa hada lama garanayo sababta loo soo xidhay loona soo mooraduugay. Balse waxaa caado u ah ciidanka gumeysiga Ethiopia inay asase lagu dhibaateynayo bulshada si joogta ah uga fuliyaan dhulka Ogadeniya iyaga oo reeraha guba, barokicin, dilal, kufsi iyo ciqaabo aan horey loo arag u geysta dadka maatida ah ee aan isdifaaci Karin.